Sri Ksetra Archaeological Museum - Ancient Pyu Cities
Halin Archaeological Museum
Sri Ksetra Antiquity
Ancient Pyu Cities » Museum & Antiquity » Sri Ksetra Archaeological Museum
« သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းအတွင်းရှိ ရဟန္တာကန်အား Archaeological Park အဖြစ် ပြုလုပ်မည်
Beikthano Archaeological Museum »
September 26, 2013 - 10:51 am | Museum & Antiquity
Sri Ksetra archaeological site museum located at Hmawza village, Pyay Township in westren part of Bago Division. Area of Museum in set up (4.628 acre). Museum has three exhibition halls. It was opened in 1961-1962 and extension halls were opened for public in 1982-1983 and 2001-2002. There are displaying in total 218 artifacts. In storage-room, there were deposited ner 400.
Sri Ksetra Museum, Hmaw Zar Village, Pyay District
In Sriksetra Archaeological Museum, there rarely collecting the various objects, such as, stone burial urns with pyu inscription, stone relics chamber, tayerdevi figure, Bodhisattra relief, Orge handling with stick, Pyu Buddha images, Vishnu and Lakshmi stone relief, iron nail, iron post, pyu inscrption, brick of pyu symbol, terracotta votive tablets, buddha images, stone sculpture of dvaraphala and others objects, and displaying respectively. Among the three exhibition halls, there are divided into twenty-one show rooms. Three are nearly displaying 50 objects.
Halin Cultural Landscape
Beikthano Cultural Landscape
Sri Ksetra Cultural Landscape
ဟန်လင်းကျေးရွာ၊ ၀က်လက်မြို့နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း
မှာ်ဇာကျေးရွာ၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း
ကုက္ကိုခွကျေးရွာ၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ မကွေးတိုင်း
Search >> ရှာရန်
Halin Ancient City
Sri Ksetra Ancient City
ပျူရှေးဟောင်းမြို့ (၃)မြို့ဖြစ်သော ဟန်လင်း၊ ဗိဿနိုးနှင့် သရေခေတ္တရာ မြို့ဟောင်းများအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
ပျူယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပျူမြို့ဟောင်းအား ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် တင်သွင်းနိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အတွက် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများ၊ ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လျက် ရှိရာ ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင် ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်။
ရုံးအမှတ်(၃၅)၊ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊
Ancient Pyu Cities | Powered by Mantra & WordPress.